खुमलटारमा को'ल्हाल मच्चियो , माओवादी केन्द्र फु'ट्यो ! - Rising Dainik
खुमलटारमा को’ल्हाल मच्चियो , माओवादी केन्द्र फु’ट्यो !
June 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on खुमलटारमा को’ल्हाल मच्चियो , माओवादी केन्द्र फु’ट्यो !
एमालेमा बबण्डर मच्चियो , ईश्वर पोखरेलले ओलीको साथ छोडे !
सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र दुबै पक्ष थप कदमलाई लिएर अन्योलमा रहँदा वि’वाद लम्बिदै गएको छ । माधव पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्न सकेको छैन भने ओली माधव पक्षका मागमा सकारात्मक छैनन । बरु महासचिव ईश्वर पोखरेलको नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेको वि’वादले पार्टी विभाजनको अन्तिम कसरतमा रहेका बेला आइतबार बसेको माधव नेपाल पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चालबाजीपूर्ण भ्रममा नपर्न कार्यकर्तालाई अपिल ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीले सं’कट बेला वार्ताको कार्ड फ्याक्ने र सुरक्षीत बन्नेभित्री चालबाजीलाई महसुश गरेको यो पक्षले अब उपरान्त लिखित रुपमै विश्वसनीय आधार नबनेसम्म वार्ता नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला नआएसम्म एमालेभित्र संघर्ष गर्ने वा वैकल्पिक पार्टी बनाएर अघि बढ्ने भन्नेमा माधव पक्षले निर्णय लिन नसक्दा एमालेको भावी दिशा नै अन्योलमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओली संसद् पुनःस्थापना भए माधव पक्षलाई गरिएका का’रबाही फिर्ता गर्ने र फकाएर आफु नै प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् । यसकै लागि उनले स्पष्टिकरण सोधिएका थपलाई का’रबाही गरेका छैनन् । तर माधव पक्षबाहेक पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलसमेत ओलीप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएकाले एमालेभित्र थप सं’कट पर्ने देखिन्छ ।
एमालेका निर्वाचित महासचिवलाई पन्छाएर विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएपछि पोखरेलमा कुण्ठा पैदा भएको तथ्य मन्त्रीबाट मुक्त भएपछि आइतबार सार्वजनिक गरेको उनको भनाईमा प्रष्ट झल्किएको छ ।
एमालेको महासचिवमा फर्किसकेपछि पनि माइन्युट लेख्ने उनको जिम्मेवारी खोसेर ओलीले आफ्ना मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई दिएका थिए । यसरी पद पाएर पनि गु’मराहमा रहेका पोखरेल ओलीबाट टाढीदै गएकाले एमालेको समीकरणमा फरक ढंगले प्रस्तुत हुने सं’केत देखिन थालेको छ । किनकी यसअघि पनि पोखरेल एमाले एकताको पक्षमा उभिएका थिएनन् ।
एमाले विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नचाँहदासम्म कुनै कोर्ष परिवर्तनको सम्भावना छैन । सत्तालिप्साको कठोरमा बाटोमा अघि बढेका ओली शक्ति बाँडफाँड गरेर माधव पक्षलाई फकाउन पनि चाहदैनन् । त्यसैले एमाले विभाजन र एकताका लागि ओलीबाहेकको अर्को शक्ति निर्णायक देखिदैन ।
माधव क्याम्पमा रुवाबासी , गोकर्ण विष्ट ओली समूहमा प्रवेश
दाजु रोजगारीको लागि बाहिर, घरमा बुवाको नि’धन भएपछि मृ’त्यु पछि सन्तानले गर्नुपर्ने सबै संस्कार आफैले गरिन
June 2, 2021 Ramash Kunwar
April 13, 2021 Ramash Kunwar
अन्ततः राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा देउवा नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, पाचौँपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको यस्तो छ जीवन संघर्ष
July 13, 2021 Ramash Kunwar